WARBIXIN: Real Madrid Oo 14 Xiddig Oo Ka Mid Ah Kooxdeeda U Raadinaysa Kooxo Cusub – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Real Madrid Oo 14 Xiddig Oo Ka Mid Ah Kooxdeeda U Raadinaysa Kooxo Cusub
May 15, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa in badan laga hadlay xiddigaha iman doona Real Madrid xagaaga iyada oo haatanba si maldahan loo xaqiijiyay saxiixa Eden Hazard, Paul Pogba ayaa ah xiddig u Zidane doonayo halka uu sidoo kale Ferland Mendy u doonayo in uu keeno si uu ula tartansiiyo xiddiga Marcelo si la mid ah Luka Jovic oo uu doonayo in uu la tartansiiyo Karim Benzema.
Laakiin xaqiiqda ayaa ah ka hor inta ayna cidna iman in ay tahay in ay xiddigo ka tagaan kooxda iyada oo ay kooxdu 14 xiddig oo kooxdeeda ah u raadinayso koox cusub kuwaas oo aan ka mid ahayn qorshaha tababare Zidane ee xilli ciyaareedka dambe.
Marka haatan la joogo kaliya 19 xiddig ayaa ku jira qorshaha tababare Zidane ee xilli ciyaareedka dambe iyada oo ay ka mid yihiin saddexda goolhaye ee Thibaut Courtois, Andriy Lunin & Luca Zidane maadama keylor Navas loo sheegay in uu raadsado koox cusub.
Daafaca Mendy ayaa laga yaabaa in uu yimaado isaga oo daafaca kooxda kula biiri doona xiddigaha Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo & Eder Militao.
Khadka dhexe ayaaa sidoo kale ah boos wajiyo cusub lagu arki doono xilli Pogba ugu sareeyo Liiska xiddigaha Donny van de Beek, Miralem Pjanic & Christian Eriksen kuwaas oo kooxda kula soo biiri doona xiddigaha haatan booskaas ka ciyaara ee Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Fede Valverde & Marco Asensio.
Weerarka waxa kooxda hogaamin doona xiddigaha Karim Benzema, Vinicius Junior & Rodrygo Goes kuwaas oo kula biiri doona xiddigaha Hazard iyo Jovic suuqa xagaaga.
Inkasta oo aan wali waxba la xaqiijin hadana waxa jira xiddgo loo sheegay in ay koox raadsadaan suuqa xagaaga sida Keylor Navas, Gareth Bale, Jesus Vallejo & Sergio Reguilo kuwaas oo amaah loo diri doono halka laga yaabo in uuna Theo Hernandez ku soo laaban kooxda.
Xiddigaha Dani Ceballos & Marcos Llorente ayaan sidoo kale ku jirin qorshaha tababare Zidane si la mid ah xiddigaha Mateo Kovacic, James Rodriguez, Martin Odegaard & Oscar Rodriguez.
Xiddigaha da,yarka ah ee Raul de Tomas & Borja Mayoral ayaa soo laaban doona laakiin Isco ayaa laga yaabaa in uu isaga tago kooxda inkasta oo uu doonayo in uu sii joogo.
xiddiga Lucas Vazquez ayaa sidoo kae ah xiddig uu shaki ku jiro mustaqbalkiisa bilihii ugu dambeeyay halka ay xiddigaha Brahim Diaz & Mariano Diaz ku jiraan xiddigaha kooxo cusub loo raadinayo.